ဂျပန်မှာ မုန်တိုင်းဝင်နေသော်လည်း ပြိုင်ပွဲဆက်လက်ကျင်းပမယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်ပြော – Myanmar News Groups
ဂျပန်မှာ မုန်တိုင်းဝင်နေသော်လည်း ပြိုင်ပွဲဆက်လက်ကျင်းပမယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်ပြော
လာမယ့် အောက်တိုဘာ (၁၃)ရက်မှာ မြန်မာ့နာမည်ကျော် တိုက်ခိုက်ရေးသမားအောင်လအန်ဆန် နဲ့ ထိုးသတ်ရမယ့် ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန်သွေးနှောကပြားကြီး ဗီရာက သူနဲ့အောင်လအန်ဆန် တို့ရဲ့ထိုးသတ်ရမယ့်ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုမင်းသားကြီး The Rock ဆီ ဖောက်သည်ချခဲ့ပါတယ်။
One Championship ကနေ စီစဉ်တဲ့စကားပြောခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ Hobbs & Shaw ရုပ်ရှင်ကို လောလောလတ်လတ် ထွက်ရှိထားတဲ့မင်းသားကြီး The Rock နဲ့ MMA တိုက်ခိုက်ရေး ချန်ပီယံကြီး ဗီရာ တို့ ပါ၀င်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုကစားသမားအနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့Phoe”Bushido”Thawတို့ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှ.Live ကြည့်ရှုအားပေးမယ့်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်..Phoe” Bushido “Thawယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မယ့်နံနက်ပိုင်းပွဲစဉ် ကတော့မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီခန့်တွင် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး.
ကျွန်တော့် ရဲ့ Light Heavy Weight ခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲပါဝင်တဲ့ညနေပိုင်း ပွဲစဉ်ကညနေ ၅ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်တွင်စတင်မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့စိန်ခေါ်သူဘရန်ဒန်ဗီရာတို့ဟာပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်..အားပေးကျမည့်ပရိတ်သတ်များအနေဖြင့် Skynet Sport HD Skynet Sport3,MRTV Entertainment channel များတွင်အားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား..
ဂျပန်တွင် မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေသော်လည်းOne Championship အဖွဲ့အစည်းမှ Century ပြိုင်ပွဲကိုအစီအစဉ်အတိုင်းဆက်လက်ကျင်းပသွားဖို့ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်.. ပရိတ်သတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Previous Article မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ စီစဉ်ထုတ်လွှင့်ပုံကို မေးခွန်ထုတ်လိုက်ပြီး မြန်မာအိုင်ဒေါကို သွားမပြိုင်ကြဖို့ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် သီရိဝင်းလှိုင်
Next Article အားပေးနေတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ကျေးဇူးပါ လိုဆိုတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင် ဆုန်ဆုန်